Xa imibono yethu ibuyela ebomini - Khetha Uphawu
Xa imibono yethu ibuyela ebomini
INkosi yethu yeRings yafikelela esiphelweni sohambo lwayo Sagittarius kwaye nje ubuyele kwinto yayo yendalo yoMhlaba ukufumana iindlela zayo zokubonisa imibono, ukusebenzisa ulwazi, kunye nokubeka iinjongo kunye nezicwangciso ezisekelwe kwiinkolelo eziqinileyo. Utshintsho ukuya Capricorn kunokuba lula okanye kube nzima, kuxhomekeke ekuxhathiseni esikubeka kwihlabathi lethu lokukholelwa kwizinto ezingabonakaliyo kunye nazo zonke ezo zinto zikhathazayo kunye nobumnyama. Izithunzi ziya kuphila, kodwa kuya kuba njalo umlingo, kwaye yonke into iya kuphumela kwi-equation egqibeleleyo yeNdalo yonke ekugqibeleni.
Ubuhle kunye nesithunzi
Phantse iminyaka emithathu, ISaturn yayihamba kancinci ngomqondiso weSagittarius kwimishini yokucacisa izinto kwaye isenze siqonde apho kufuneka sithobe kwaye sibe nenyani ngakumbi. Iqamza liye lanyamalala kwaye zonke ezo goggles zipinki besihamba nazo zophukile, oko kulungileyo. Nangona oku kwadala ubunzima obuninzi kwaza kwenza abanye bethu bathandabuza yonke injongo yethu ebomini kunye nenjongo esasizibekele yona kwixesha elidlulileyo, inyaniso yafunyanwa kweyona ndawo imnyama kwaye isiseko samiselwa amaxesha aseza kuza.
Siyazi ukuba uSaturn ukhohlakele njengoko efumana, uhlala ebalisa amabali obunzima, izithintelo kunye nelahleko. Nangona kunjalo, kufuneka sikhumbule ukuba imele ukholo lwethu lokwenyani kunye noqhagamshelo lwethu noThixo kunye neNdalo yonke, isifundisa malunga noxanduva kunye nobufutshane bobomi apha eMhlabeni. Ukusikelwa umda kwayo kungokwemvelo kwaye kunokoyiswa kuphela xa sikwamkela kwaye sikuqonda ngokwenene ukuntsonkotha kwazo kunye nemfuneko kubomi bethu. Sakuba samkele isikhundla sethu, apha kwaye ngoku, sinokukhululeka kuloyiko kwaye siqalise ukusebenza kwindlela yokuphuma, senze isicwangciso esigqibeleleyo esiya kusikhulula.
Ukudala umgca wokulinganisela phakathi kwexesha elidlulileyo kunye nexesha elizayo, ukubuyisela iintliziyo zethu kunye nemizimba yethu kulo mzuzu ngexesha, uSaturn wayenento yokufundisa kwaye iintetho zayo zihlala zisebenza ngenjongo. Kwiintsuku ezizayo, ziya kubonakaliswa kwihlabathi lokwenyani kwaye sonke sinomsebenzi wokuphumeza ulwazi lwethu kwizinto ezibonakalayo, umzamo wekhondo lomsebenzi, kunye nawo wonke umsebenzi esinqwenela ukuwenza. Imibono ebesinayo kude kube ngulo mzuzu iya kuguqukela ebomini kwaye ngokuxhomekeke kwinkolelo yeenkolelo zethu, baya kukhulula okanye bathuthumbise. Ukholo sele luza kubonakala, lubonwa njengengxelo kuzo zonke ezo zinto zifumaneka ezintliziyweni zethu.
Ixesha liya kuhamba ngesantya esiqhelekileyo, nangona kunjalo oku kunokubonwa ngokweembono zethu zobuqu. Kancinci kwaye uzinzile, i-equation nganye yobomi sele iza kukhula kwaye ibonakale ngaphezu kwentloko yethu, njengomnqamlezo oza kunxitywa okanye ihalo yokusiphakamisa inyathelo elinye phezulu ngayo yonke imitha yokukhanya esivula kuyo iintliziyo zethu. Ukuba asibeki ukuchasana okukhulu ekujongeni izithunzi zethu, siya kuba nethuba lokuthatha uxanduva lobomi bethu kwaye singene nzulu kwihlabathi elingazi nto ukuze ekugqibeleni sihambe kwaye siphule imida yethu.
I-Capricorn Aries Ngena Iponti Gemini